Acrylic Tiered Display Stand Factory, Mpamatsy - China Acrylic Tiered Display Stand Manufacturer
Acrylic cosmetic case organiser Combinable Jewelry Holder make up Cosmetic Storage Display Box
Afaka mamonjy ny efitranontsika, ary manao azy ho madio sy madio kokoa. Ho an'ity iray ity dia vita amin'ny ampahany roa izy io, ny ampahany ambony sy ny tapany ambany dia azo amidy misaraka na amidy miaraka, hafa ny vidiny. Ny vidiny aseho dia ho an'ny andiany iray manontolo. Aza misalasala mahazo anay raha ampahany iray ihany no ilainao. Miantsena sambatra! Anaran-dahatsoratra boaty fitehirizana kosmetika habe 240 * 150 * 187mm Fitaovana PS Fitaovana Funtion
Firavaka akrilika azo aforitra vava volamena
1. Mihazona kavina 260 (tsiroaroa 130). Mety koa amin'ny haba sy rojo. 2. Hazo kavina tonga lafatra amin'ny ankamaroan'ny fomba kavina, ao anatin'izany ny studs, drop and hoops. 3. Famolavolana endrika konsina vita amin'ny savily efatra vita amin'ny akrily vita amin'ny mazava matevina. 4. Tsara ampiasaina any an-trano sy amin'ny fampiasana ara-barotra amin'ny butikety sy foibe fanaovana asa-tanana. 5. habe misokatra tanteraka: 17,13 x 11,22 x 0,8 santimetatra eo ho eo.
Fomba mihaja habe mazava plexiglass mpihazona borosy 5 vatasarampanga acrylic mpiorina fitehirizana container
Anaran-javatra lafo vidy habe mazava famafazana plastika borosy mpihazakazaka makiazy mpiorina sarom-panaka miaraka amin'ny fonony fonony Material vita tanana namboarina mazava an-trano / lakozia plexiglass vatasarihana stackable mpikarakara akrilika fitehirizana kabinetra Acrylic Size namboarina loko mangarahara, fotsy, miverina na fanao Logo & pirinty Silk-lamba fanontana, taratasy sticker, fametahana famindrana, UV pirinty, Laser na sokitra CNC, taratasy fametaka entana Export fonosana fonosana fonosana + kitapo bubble + baoritra baoritra Fandoavam-bola T / T, Western Union ...
Ity singa ity dia vita amin'ny tontonana akrilika mazava tsara. Izy io dia ahafahanao mampiseho vokatra marobe amin'ny fandaminana milamina sy voalamina. Omeo fidirana mora amin'ny vokatra ianao ary ampitomboina ny haben'ny mpanohitra. Ity risika akrilika 3 dingana ity dia feno fonosana sy lamba fanadiovana, mora amina fivoriambe ary avelao ho afaka maimaim-poana ny vovokay miakatra.
Acrylic finday fitaovana fampisehoana fampisehoana 5 tiers fiara charger fijoroana
Fitaovana kalitao avo lenta acrylic Size W200 * D150 * H600MM na rindrambaiko matevina 3mm namboarina mba hampisehoana USB (rindrina USB, USB fiara), tariby data, bateria azo alefa sns. Misy talantalana 5 ary miaraka amin'ny sticker Payment T / T, PayPal, Western Union, Vola gram santionany santionany santionany: 5-7 andro fiasana; santionany vidiny: $ 35.00 (vidin'ny santionany dia azo averina raha toa ka mahatratra 200 pcs ny habetsahan'ny masonao) 200 pcs: 12-15 andro fiasana, 5 ...
Ny fisehoan'ny tohatra fiakarana akrilika amin'ny tohatra dia mijoro miaraka amina sisin-dàlana izay hitazonana ny zavatrao aseho tsara sy milamina tsara. Ny akrilika dia mazava toy ny krystaly, tsara tarehy tsara tarehy, ary tsy miforitra toy ny plastika. Natao hitazomana ireo kojakoja makiazy ankafizinao sy ireo vokatra tsara indrindra ao aminao toy ny poles fantsika, menaka manitra ary maro hafa handao ny efitranonao sy ny fandroana korontana.
Haingo mangarahara avo 3 Dingana Acrylic Riser talantalana Toy Portable Tier Display Stand
Ity entana ity dia vita amin'ny 5mm hatevin'ny tontonana akrilika mazava be. Roa tongotra hitazona ny dingana 3 acrylic riser hanehoana zavatra isan-karazany. Ny fisehoan'ny dingana acrylic mazava an'i Niubee dia ahafahanao mampiseho vokatra marobe amin'ny fandaminana milamina sy voalamina. Omeo fidirana mora amin'ny vokatra ianao ary ampitomboina ny haben'ny mpanohitra. Niubee's 3 dingana acrylic riser feno fonosana sy lamba fanadiovana, mora amina fivoriambe ary avelao hanafaka antsika foana ny vovoky ny riser amin'ny fotoana rehetra.
Acrylic Block Sign Holder, Mpihazona Sign Countertop, Aseho fihodinana akrilika mihodina, Seho solomaso akrilika, Magnetic Acrylic Sign mpihazona, Mpihazona famantarana vita amin'ny rindrina,